Ungawufaka njani amalungiselelo kuGoogle Earth / iimephu -Geofumadas
Ikhaya/Iiphotography/Ungangena njani ulungelelaniso kwiGoogle Earth / maps
IiphotographyGoogle umhlaba / imephu
Ukuba ufuna ukufaka ulungelelwaniso oluthile kwiiMephu zikaGoogle okanye uGoogle Earth, kuya kufuneka uchwetheze injini yokukhangela, kunye nemigaqo ethile ekufuneka uyihloniphile. Yindlela ebonakalayo yokuphuma xa ufuna ukuthumela umntu ngengxoxo okanye nge-imeyile yokulungelelanisa esifuna ukuba bayijonge.
I-Google Earth isebenzisa iisistim zokulungelelanisa ifomathi ye-latlong-uhlobo lwe-angular, ngoko ke kufuneka ukuba zibhalwe kule fomu kwi-odolo "latitude, longitude".
Kwimeko yobubanzi benyakatho ye-hemisphere, kuyakufuneka ukuyibhala ngokuchanekileyo, ngokubi kwi-hemisphere esemazantsi. Kwimeko yobubanzi, kwi-hemisphere esempuma (ukusuka eGreenwich ukuya e-Asiya) iya kuba ntle kwaye ngasentshona, oko kukuthi, eMelika iya kuba mbi.
Kwimeko yeGoogle Earth, kubhaliwe kwibha yoshihlo, ibhaliwe phantsi uze uklikha kwi-search
Kwimeko yeGoogle Maps, kwi-injini yokusesha yangasese yangasese, kwaye iqhosha "lokukhangela" lucindezelwe njengoko kuboniswe kule mizekelo elandelayo.
1. Ukulungelelanisa ngee-degrees, imizuzu kunye nemizuzwana(DMS): 41°24’12.2″N 2°10’26.5″E
Kule meko, i-decimals kufuneka ibe kwimigqomo kwaye i-degrees kufuneka ijikelezwe.
Kuthetha ukuba ukudibanisa ngama-41 degrees ngaphezu kwe-equator, kuba kulungile kwaye i-2 degrees empuma yeGreenwich, kuba ilungile. Impazamo eqhelekileyo luphawu lomzuzu, kuya kufuneka usebenzise ('), Amaxesha amaninzi abantu bayayiphambanisa nesimelabizo kwaye bafumane impazamo (´).
Ukuba unengxaki ukufumana isimboli, into onokuyenza kukukhuphela unamathisele kule dilesi 41 ° 24'12.2 ″ N 2 ° 10'26.5 ″ E kwaye utshintshe idatha.
2. Ulungelelanisa ngee-degrees nemizuzu (DMM): 41 24.2028, 2 10.4418
Iidigri zijikeleziwe kwaye imizuzu ibandakanya izigqibo eziza kuthathwa yimizuzwana. Njengoko ubona, ulungelelwaniso olufanayo luboniswa emazantsi kuphela ngeedigri.
3. Uququzelele kwiiyure zamadesimali ngaphandle kwemizuzu okanye imizuzwana (DD): 41.40338, 2.17403
Kule meko kukho iidridi kuphela kwaye iyona ndlela isetyenzisiweyo yeset / lat kunye nendlela ongayibona ngayo, isoloko kwisigxina esiphezulu sidibanisa kwi-graods, imizuzu kunye nemizuzwana igcinwa.
4. UTM idibanisa kwiGoogle Maps
Ukulungelelaniswa kwe-UTM akukho msebenzi kwiiMephu zikaGoogle ezivumela ukungena kwezilungelelaniso. Unokwenza oko ngetemplate ye-Excel kwaye ubarhuqe njengoko kubonisiwe kwisicelo esilandelayo.
Kuya kufuneka uyazi ireferensi yezo zilungelelaniso. Kuyabonakala ukuba zii-UTM, kodwa kuya kufuneka uyazi indawo kunye nesalathiso sedatha, ukwenza uguquko lwe-UTM ukuya kwiidigri.
nanini i-oliveros uthi:
indlela yokudlula ukulungelelanisa i-decimals ukuya kumgangatho, umzekelo we-coordinates point #1 kule 1105889.92 enyakatho ye-1197963.92.
Inqaku # 2 le 1106168.21 enyakatho ye1198330.14.
Ngobusuku obuhle, ndingathanda ukudibanisa iiplanethi kwiimephu zeGoogle, i-ahem East 922933 kunye nenyakatho ye-1183573 ndihlala ndinenkinga yokuziguqula kwi-longitude kunye ne-latitude kuba i-georefere kwiindawo ezingenanto nantoni na endiyisebenzeleyo ... ndiyabonga kakhulu kakhulu
Kuba yindlela esebenza ngayo inkqubo ye-UTM. Umda ngamnye uqulethe iidigri ezi-6 zobude, kodwa ekubeni zineeyunithi eziqikelelweyo, zonke zinemeridiya embindini nge-X = 500,000 kwaye ngenxa yoko inyuka iye ngasekunene, ide ifike kummandla olandelayo. Kwaye ngasekhohlo iyancipha kude kube sekupheleni kwendawo.
Hlola oku kuthunyelwe
UKenny Jeanfranco uCasamayor Moreno uthi:
Kwi-CAD igridi iya njengale (ukusuka eNtshonalanga kuya eMpuma):
Ndandifuna ukubuza umbuzo:
Kutheni, xa ndisuka kwindawo ye-18L ukuya kwi-17L, ngaba ulungelelwaniso "luqala kwakhona" kwakhona ngexabiso eliphezulu (ukunciphisa njengoko ndiqhubeka ndisondela empuma)? Ukusebenza kunye ne-UTM Coordinates, kunjalo.
Yintoni eyenzekayo kukuba ndine-hydrographic basin kwi-CAD, apho ndifuna ukufumana izikhululo ze-pluviometric, ingxaki iqala ngenxa yokuba i-CAD ine-UTM yokulungelelanisa kwaye ezi ziqhuba, oko kukuthi, azenzi "ukusetha kwakhona" endikukhankanyileyo. kumhlathi ongaphambili.
Ndicinga ukuba oku kuya kuqondwa kangcono:
Isikhululo seSafuna: 210300.37 m. E. - Umda we-18L
Isikhululo seCorongo: 180717.63 m. E. - Umda we-18L
Isikhululo seCabana: 829 072.00 m. E. - Umda we-17L
Isikhululo saseRinconada: 767576.77 m. E. - Umda we-17L
Ndiyathemba ukuba unokunceda, kuba ndiyidinga kakhulu.
Harvey Scarlet uthi:
Iimephu zikaGoogle zicela ifomathi ethile yedatha ukufumana indawo. i-Latitude yokuqala ngokomzekelo: 3.405739 (qaphela, inqaku kwaye kungekhona ikoma) kunye nobude -76.538381. Ukuba i-latitude isemantla iya kuba positive, oko kukuthi, ngaphezu kwe-ikhweyitha, ukuba i-longitude isentshona ye-meridian engu-zero okanye iGreenwch, njengakule meko, iya kuba inegetive kwaye zombini iiparameters zahlulwe ngesiphumlisi esingena-no. Izithuba ezingaphambili okanye ngasemva zamanani kuba izithuba zithathwa njengenxalenye yolungelelwaniso kwaye ngokuqinisekileyo ayifumani ndawo. Ekugqibeleni kufuneka "3.40573,-76.538381" kwaye emva koko Ngena. Iingcaphuno zichaza idatha ekufuneka ifakwe, akufanele ifakwe.
Ukuguqula kwiindawo zendawo, kwiintlobo X, Y umzekelo 497523.180,2133284.270
Sawubona, kusasa ekuseni, ndifuna ukufumana isiqwenga somhlaba, ndinezi nxu lumano kuphela, ndiyathemba kwaye unokunceda.
X 497523.180 X 497546 .300 X 457546.480 X 497523.370 Y 2133284.270 Y2133284.310 Y 2133180.390 Y2133180.340 enkosi kakhulu ndiyathemba kwaye ungandinceda
Ngokuqinisekileyo kulula kakhulu oku, landela amanyathelo alandelayo:
i-pocisionate kwikhibhodi ye-alphanumeric kunye nomhlobo ongaphambili
Jonathan Loor uthi:
Ngentsasa ekuseni, uxolisa unokundinceda ngalezi 526.437,86 (ubude) 9.759.175,68 (ububanzi), andazi ukuba ungangena njani le data kwiGoogle emhlabeni.
Ukubuya kwam kukuba ndineeyunithi ze-utm kwaye kufuneka ndiziguqulele kwiidigri zedesimali, ekuphela kwento eyamkelweyo nguGoogle emhlabeni.
faka izixhobo, kwibhokisi ye-lat elide kodwa ayitshintshi kuphela yamkela iidridi ze-decimal
kwaye ungayifumana indawo, ungena kwimenyu izixhobo >> ukhetho
kwiphepha lembono le-3d, kukho ibhokisi yeqela ethi u-lat / long, ucofa kwi-radius ejikelezayo ye-mercator kwaye uyamkela.
apho uya kufumana igridi ehlabathini lonke x-axis la amanani, kunye y-axis na oonobumba, EJM, Peru na kwimimandla 17M, 18M, 19M, 17L, 18L, 19L, 18K And 19K.
Ndiyathemba ukuba ikukhonza
Le ngqungquthela iphindaphindiwe kwiindawo ze-UTM ze-60 ezahlula ihlabathi, kunye nakwiindawo ezisemantla naseningizimu.
Kufuneka ukwazi indawo kunye neendawo.
IGoogleEarth ibonisa ikhonkco kwi-WGS84 datum. Kodwa zininzi ezinye iindawo, ke kuya kufuneka ubuze ngazo.
Ukuba awazi kwaye ukhetha ukuqhuba ...
1. KuGoogle Earth, yiya kuqwalaselo kwaye usebenze ngokudibanisa, kwi-Universal Traverso Mercator. Sebenzisa ukhetho ukuze ubone igridi.
2. Apho uya kubona iindawo, ndicinga ukuba uyazi ukuba liliphi ilizwe olindele ukufumana loo ndawo. Ke sele unayo indawo, kwaye ukuba inqaku lakho lingaphezulu kweikhweyitha ke umhlaba wakho ungasemantla.
3. Ngesixhobo seGoogle Earth ukubeka iingongoma, khangela indawo kuyo nayiphi na indawo, nakwiphaneli ebonisiweyo utshintsha izilungelelanisi, ezibonisa apho ujonge khona kwaye ukhetha indawo kunye nehemisphere oyifumene kwinyathelo elidlulileyo.
Ndifuna ukubeka kuGoogle emhlabeni ezi zilungelelaniso kwi-utm emantla 6602373, empuma 304892 kwaye andazi ukuba kanjani! ndincede!!!!
Ufaka inqaku kwiGoogle Eart, emva koko uyichukumise kwaye ubone iipropathi. Apho utshintsha ulungelelwaniso kwithebhu ye-UTM.Kodwa kufuneka uyazi iNdawo, kuba ulungelelwaniso luphindaphindiwe kwindawo nganye ye-60 yehlabathi.
ricardo loya uthi:
Molo, ndifuna ukufumana le ndawo kugoogle emhlabeni.Andikwazi, ungandinceda okanye ndingena njani kubo?
Kuyabonakala ukuba luvavanyo apho ulungelelwaniso olusetyenzisiweyo lusetyenzisiweyo, umzekelo inqaku elibizwa ngokuba yi-5,000.00 yaqalwa ukuze kungabikho amaxabiso amabi.
usebenzisa umhlukanisi wendawo yokugqibela kunye ne-comma njengomhluli wololuhlu
Ukuba into onayo yi-AutoCAD, yenza njalo:
Umyalelo wokulawula, faka
ubhala umnxibelelwano, faka
umyalelo wokungena, faka
Ubhala ulungelelwaniso ... njl.
Enye inketho kukubambisana nabo kwi-Excel ukuba bangababhali ngokubodwa
bonayo Ndingathanda ukuncedisa kule ngxaki encinane endiyayo, ndinemephu yensimi yam kwaye inezi nxi
Ndifuna ukuphawula umjikelezo wendawo.
Sawubona! Iingqungquthela zakho zihambelana neMyuziyam yoMmandla we-Ica, eJr Junin kufuphi neJr Pisco. Ndiyathemba ukuba ndikuncede. Ukubulisa
richard quispe idme uthi:
I-google yomhlaba ingifumana kunye neendlela eziphambili ngasentla nakumaMpuma kwindlela yokulungelelanisa ngoba uvela kwi-universal idibanisa ibonakala kunye nezilungelelaniso
Ndingena njani ingongoma kwimephu yeGoogle? ??? kwaye engabonakali kwimephu, ndingathanda ukungena kuyo.
Ubhala kuphela kwiGoogle Earth
Ndingathanda ukuba undincede ukuba ndifumane isikhokelo okanye unginike inqaku lokuba iyiphi inxenye ye-ica ihambelana ne-latitude -14.0681 ubude -75.7256
Ndiza kukuxabisa kakhulu uncedo lwakho
Molo Romina, uGoogle Earth ukuvumela ukuba ungenise ii-vertices ngolungelelwaniso onalo. Kodwa awunakumcela ukuba akwenzele iipoligoni.
Kukho okukhethwa kukho ukuba ungenise iimitha uze uzidwebe ngqo kwiGoogle Earth.
Okanye ukuba wenze konke kwi-AutoCAD uze uthumela ngaphandle kwe-kml, okuya kuba lula ngenxa yokuba unako ukungena kwiimpawu ezithengiswayo kunye neepropati ezikhishwe kanye.
Ndinoluhlu lwezilungelelaniso (isibanzi kunye nobude) kwi-excel, kwaye ndifuna ukuvelisa iipolygons (ulungelelwaniso endinalo kwi-excel ziivertice zeepolygons ekufuneka ndizenze). Bendifuna ukwazi ukuba ndingangenisa ezi zilungelelanisi kuGoogle umhlaba ukusuka egqwesileyo kwaye ndiyixelele ukuba izozoba iipolygons ezisekwe kwezo zilungelelanisi. Ukuza kuthi ga ngoku bendizoba iipolygons kwaye ndiqhuba iincam "ngesandla".
Usebenzisa isimboli engeyiyo imizuzu, kwaye uyifumene emva kweedigri ezingama-33. Kuya kukusebenzela ngolu hlobo:
33 ° 05'50.44, 71 ° 39'47.57 w
uphawu 'kuno' kwaye 'alufani
Oku kuya kuba njani?
33 ° -05- 50.44 S - 71 ° 39- 47. 57 w
akukho misebenzi yimbi….
Ulungelelaniso lwenkqubo yeetriki ayinakungeniswa, kuba liphindaphindiwe kwinqanaba ngalinye nakulo lonke ilizwe, oko kukuthi, i-120 ngezinye ixesha iququzelelanayo.
Alicia Castro uthi:
Kuya kuba lunomdla ukukwazi ukungena kwiikholeji kwiiyunithi zemetriki.
Imizuzu ye-North 10, imizuzu ye-40, imizuzwana ye-42, ii-degrees ze-72, imizuzu ye-32, ii-03 imizuzwana
Ngaba uyazi ukuba bekukhangeleka njani?
Sawubona uHarry, into enhle kwimifanekiso kunye nakwiimvenge.
Oko unako ukulawula kunye nezinto ofuna ukuzilungelelanisa ngokusekelwe kwezo ngongoma.
Ngoko vele usebenze umyalelo, uze uhambe ngomnye ubeke ingongoma yokuhamba kunye nenqaku lokubhekisa.
Emva koko, ungena, ukhetha izinto ukuba zilungiswe kwaye ke utshintsho lwenziwe.
Hlola esi sithuba
Ngentsasa ekuseni ndingathanda ukwazi ukuba umntu uyazi indlela yokujonga umfanekiso
I-Google Earth kwimenyu yeemephu, izixhobo, iphepha lokurubha
hehehehe ibingu "ugcinile" enkosi efanayo